तिमीले दिएको गुलाफ ओइलिसक्यो, चोट भने आलै छ
काठमाडौं । विश्वभर आज ‘भ्यालेन्टाइन डे’को उत्सव छ । आ–आफ्ना प्रेमी प्रेमिकालाई मात्रै होइन मन पराएकाहरुलाई गुलाफको फूल दिएर प्रेमिल शुभकामना साटासाट गरिरहेका छन् । तर, प्रिय, तिमीले दिएको गुलाफको फूल ओइली सकेको छ । त्यो फूललाई जोगाउन मलाई निकै हम्मेहम्मे परेको छ । म चहान्छु, तिमीले दिएको त्यो गुलाफको फूल तिमीलाई नै फिर्ता गर्न । तिमीले गुलाफको फूलसँगै दिएका प्रेममय शुभकामना उहिल्यै फिर्ता लग्यौ, अब ओइलिएको यो गुलाफको फूल लिन कहिले आउँछौ ? म हरेक भ्यालेन्टाइन डेमा तिम्रो बाटो हेरेर बसिरहेको छु र नआउन्जेल बसिरहने छु ।
प्रेम सम्बन्ध कायम भएको दुई वर्षमै तिमी कसरी मबाट अलप भयौ । तिमी आज कहाँ छौ ? तिम्रो अनुपस्थितिले मलाई कति गाह्रो भइरहेछ, त्यो कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौ । जसलाई भविष्य देखेँ, उही आज मबाट हरायो वा खोसियो, कुनै औपचारिक खबर छैन । सुनेको छु, तिमी कसैको प्यारा भइसक्यौ रे ।
यदी यो सत्य हो भने भन, ममा के कमि देख्यौ र ? मसँग किन ग¥यौ प्रेमको नाटक ? कसैको भावनामा खेलवाड गर्ने हिम्मत तिमीमा कहाँबाट आयो ? मलाई देखाएको तिम्रो शालिनता र हार्दिकताले यी सबै पत्याउन मलाई गाह्रो भइरहेको छ । तिमीलाई मन दुखाउने कुनै कार्य गरेको मलाई सम्झना छैन । तर, मेरो जीवनबाट एकाएक तिम्रो पहलायनले मलाई आजपर्यन्त पीडा बनेर बसिरहेको छ ।